Uhlalutyo kunye neempawu zokujonga esweni i-AOC C24G1 | Iindaba zeGajethi
Iimonitha ziyinxalenye efanelekileyo Zombini malunga nomsebenzi wethu kunye neeyure zethu zokonwaba, ukuba uchitha ixesha elininzi uncanyathiselwe kwi-PC uyazi kakuhle ukuba utyalo-mali ekubekweni kweliso olulungileyo lutyalo-mali olukhulu, nokuba ungumdlali kwaye ufuna ukuphucula ukusebenza kwakho, ngokungathi uyasebenza kwaye kufuneka unakekele ubuninzi bokubona kwakho.
Ukusetyenziswa kokubini, kodwa kugxilwe ngokucacileyo kwi midlalo, sineliso I-AOC C24G1, esweni ungumdlali nge-144 Hz kunye nokusebenza kakuhle. Hlala nathi ukuze ufumane uhlalutyo lwethu olupheleleyo lweliso le-AOC eliza kukuvumela ukuba ufumane uninzi lwePC yakho kwezona midlalo zinzima zevidiyo.
Njengamaxesha onke Siza kuqhuba uhlalutyo lwezixhobo, uyilo, iimpawu zobuchwephesha kwaye okona kubaluleke kakhulu, amava ethu okusetyenziswa kwimihla ngemihla yokujonga esweni eyilelwe ukuba sikwazi ukubanga kangangoko ngaphandle kokugungqa, ubuncinci sibulela koko isinika kona ephepheni, yiyo loo nto kubalulekile ukuba ngaphambi yifumane ngale khonkco Ungakulinganisa ukuthenga kwakho umbulelo kumava osinike wona kunye nohlalutyo olunzulu esikwenzele lona.
1 Izixhobo kunye noyilo: Indlela ecacileyo yokudlala
2 Iimpawu zobugcisa: Alusweli nto
3 I-FreeSync, iFlicker Simahla kunye nezinye izinto
Izixhobo kunye noyilo: Ukugxila okucacileyo ungumdlali
I-AOC ibonakaliswe ngokwenza igama elihle kwicandelo ungumdlali, kwaye ayifumaneki kuphela ngokuchazwa okuhle, koku Kuya kufuneka ubonelele ngezixhobo kunye noyilo olwenza abalandeli bomdlalo wevidiyo bazive bechongwe ngemveliso abayithengayo, le AOC yazi kakuhle kwaye uyisebenzisa kuqheliselo loyilo lwakhe. Ibhokisi inkulu ngokungaqhelekanga ekubekweni esweni kwee-intshi ezingama-24,5 "kuphela", ifika ikhuselwe kakuhle kwaye nazo zonke iintlobo zezincedisi, ii-wiring ezibandakanyiweyo zikumgangatho ophezulu kwaye ukusetyenziswa akuyi kuba yingxaki.
Ubungakanani: Ubukhulu: 512.8 x 536.9 x 244.9 mm
U bunzima (kubandakanya iphakheji): I-4,46 Kg (6,51 Kg)
Sinolwakhiwo oludibeneyo lweplastikhi kunye nesinyithi (ngakumbi kwisiseko), si-ndlongondlongo kumnyama kunye neethoni ezibomvu ukwenza umahluko. Isakhelo sincinci kumacandelo aphezulu nakwicala, ngelixa limile kwindawo esezantsi apho sinophawu lwe-AOC. Sisibekeli esigobileyo esine-"V" engqingqwa kunye nesitrato esivumela ukuba siphakamise kwaye silungelelanise esweni emehlweni ethu. kunye neemfuno zethu, asizukufuna naluphi na uhlobo lwenkxaso okanye uhlengahlengiso lwezincedisi, liza lilungele ukusetyenziswa kwaye licudiselwe kwelona liphezulu. Akukho nto ingako sinokuyithetha malunga noyilo ngaphaya kwento yokuba inzima kakhulu enkosi kwisiseko sayo esinokuhlengahlengiswa, ayizukusuka kwindawo esiyibeke kuyo, kwaye izixhobo zikumgangatho oqinisekisiweyo. Kwinqanaba leencasa, ezahluka njengamaxesha onke, kucacile ukuba abayilungiselanga becinga ukuba ayizukubonwa.
Iimpawu zobugcisa: Alusweli nto
Ukubeka iliso kwi-AOC C24G1 Igobile
Uhlobo lwepaneli VA LCD ene-178º yokujonga ikona Akhanye - 250 cd / m2
contrast ngesiqhelo i-3000: 1 kunye ne-20M eyi-smart ukuya kwi-1
Imibala 16.7 yezigidi
FreeSync Ewe nge-144 Hz
Isigqibo I-HD epheleleyo 1280 x 1080
Iikitikiti I-VGA-i-DisplayPort- i-2x i-HDMI (i-HDCP yeDijithali) kunye ne-AUX ngaphakathi / ngaphandle
Izithethi Idibeneyo Hayi
Ixabiso Ukusuka kwi-216 euro
Njengoko sibona, akukho nto iyenzayo, akukho datha zimbini ezivelele ngaphezulu kwazo zonke ukudlala, inyani yokukwazi ukusebenza neFreeSync kwi-144 Hz kwaye siyakuba ne-1ms kuphela yexesha lokuphendula, Awuyi kuzithethelela xa ufumana i-headshot kwi-Fortnite okanye kwi-Apex Legends, ayilotyala lokulibaziseka.
Inemigangatho emibini ye-HDMI 1.4, ilungele xa sinezixhobo ezininzi ezixhumeneyo kwaye sifuna ukufumana okuninzi kuyo, kuya kwenzeka okufanayo nge Umboniso wePort, kuqheleke kakhulu kwiindawo zobungcali kwaye ikhebula lalo libandakanyiwe ebhokisini (ubuncinci kwiyunithi yethu). Xa kuziwa ekuyinyuseni, kulula kakhulu, Silingana nje nokubeka iliso ngenkqubo yokubamba kwisiseko, kwaye sisilinganisa isiseko ngesikrufu kwisiseko esipheleleyo. Ilula kwaye ayinzima, ukongeza, siyakhumbula ukuba ukuba ufuna ukudibanisa iziphumo zomsindo, sinonxibelelwano lwe-3,5 mm Jack kwisithethi sangaphandle.
I-FreeSync, iFlicker Simahla kunye nezinye izinto
Siqala ngolunye lwezongezo kule AOC C24G1, kwaye kukusetyenziswa kwetekhnoloji yeFlicker-Free esebenzisa ipaneli yokukhanyisa yangoku ethe ngqo (DC yangoku), ecutha ukukhanya kwamanqanaba okukhanya. Ngokunciphisa i-eyestrain kunye nokudinwa, sinokuchitha iiyure ezininzi phambi kweliso (ngokufanelekileyo, kuhlala kulungile ukuyeka zonke iiyure ezimbini). Inyani yile yokuba eli asilo candelo elibonakalayo kakhulu xa kudlalwa, okanye ubuncinci lelona ndingalixabisanga.
Izinto ziyatshintsha ukuba sithetha ngeFreeSync, ngaphezulu kwetekhnoloji eqinisekisiweyo. Akukho sidingo sokuya kuseto oludinayo Siza kufumana elonaqondo liphezulu lesakhelo kunye nomboniso ocekeceke ngokubulela kubuchwephesha be-AMD's Free-Sync technology. Oku kunomtsalane ngakumbi ukuba sidlala kakhulu kwi-FPS kunye nolu hlobo lomdlalo apho kubalwa khona umzuzwana ngamnye, kuba akufuneki kubekho ukutsiba phakathi kwesakhelo okanye ukulahleka kobukhali emfanekisweni.
Sijongene nokubeka esweni okufikelelekayo okunezixhobo zenqanaba lokuqala, Nangona kufuneka sicace ngokulinganayo ukuba asinasayizi enkulu, inyani kukuba ii-intshi zayo ezingama-24 kwaye simema ixesha elininzi ukuba libe nexesha elimnandi kwisisombululo se-FullHD. Kukho ezinye iindlela ezinkulu ekunokucetyiswa ukuba zitshintshe amaxabiso, ubuncinci ii-intshi ezingama-27 ezinesandi zilungile, kuba Andisifumani nje isizathu sescreen esigobileyo se "intshi" ezingama-24, njengoko inokude idimazeke ngokuxhomekeke kwindawo ekubekweni esweni kuyo.
Ijika elingama-24 "alifuneki.
Indibano ilula kodwa ukupakisha kugqithisile
Umahluko omkhulu kwixabiso kunye neemodeli ezineesentimitha ezingaphezulu
Into endiyithandayo encinci malunga nokubeka iliso kanye yile bendiyichazile imigca embalwa edlulileyo, Inyaniso yokuba sifumana ukugoba kwepaneli yee-intshi ezingama-24 kuphela, ke sicebisa ukuba sifumane imodeli ubuncinci be-intshi ezingama-27. Enye into efanelekileyo kukuba ibhokisi inkulu kakhulu kangakanani ekubekweni esweni kobukhulu kwaye ayinayo inkqubo elula yokupakisha.
Umgangatho wezinto kunye nokujonga uyilo
Inani elikhulu lonxibelelwano, zonke ziluncedo kwicandelo labo
Malunga neepaneli zomgangatho we-VA ngamaxabiso asezantsi
Akukho kuvuza ukukhanya okanye izitenxo
Into emnandi kukuba ngaphandle kokuba ziigophe asifumananga «ukuvuza okulula» kuyipaneli yeWLED kunye neVA, into eyothusayo, kodwa ke, yinto enokuyilindela esweni kwinto engaphezulu kwama-euro angama-200 kwaye ngakumbi ngesiqinisekiso se-AOC. TNdiyathanda ukuba iza nalo lonke unxibelelwano oluyimfuneko, ii-HDMIs ezimbini Zizinto ezisisiseko somsebenzisi onjengam osebenzayo kwaye udlala ngesiliso.
Unako yifumane ngale khonkco yi Ixabiso liphezulu kancinci kune-210 euro, Akunakufane sifumane uqhagamshelo lomgangatho kunye nezixhobo zentsimbi kwinto enje, nangona ii-intshi ezingama-24 zisenokuba "zincinci" kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo kunye neempawu zokubeka iliso kwimidlalo ye-AOC C24G1